Qalbiga Ragga Kama Adka Dhagax Ee Kaliya Waxaad Sameysaa… | alcarabiya.com
Home » Arimaha Qoyska » Qalbiga Ragga Kama Adka Dhagax Ee Kaliya Waxaad Sameysaa…
Qalbiga Ragga Kama Adka Dhagax Ee Kaliya Waxaad Sameysaa…	Qalbiga ninka ma ah mid sidaa u sii adag kaliya waxaa lagaaga baahan yahay in aad fahanto habka ninkaada iskuna day in aad soo jiidato dareemihiisa ka hor caqligiisa .
Ogaaw ninka ragga waxa uu isku hareeryay silig waxa uuna iska muujiyaa awoodo balse ogaaw waa cunug yar oo waxa uu kaaga baahan yahay in ad ula dhaqanto hab dareeylid iyo jaceyl ku saleysan , waxaadna raacdaa talooyinkaan .
Gabaryaheey u muuji ninkaada sida aad ula tacajubsan tahay isla markaana sida uu awood ugu leeyahay in uu u dulqaato dhibaatooyinka iyo qadarinta aad u hayso..
U muuji sida muuqaal ahaan xitaa ad ugu qanacsan tahay iyo habka uu libsato iyo noocyada dharka uu xirto.
Una sheeg mar waliba in aad jeceshahay in aad maqasho codkiisa sidoo kalana aad ka hesho qaabka uu u dhoola cadeeyo .
U muuji in aad heshay ninka u qalma noloshaada kaasina uu yahay isaga , waxaad ogataa in maqalka erayadan ay ninkaada siinayaan kalsooni hor leh
One Response to Qalbiga Ragga Kama Adka Dhagax Ee Kaliya Waxaad Sameysaa…	saygar2010@hotmail.com Reply
March 10, 2013 at 9:11	Nin iyo naagba ma ay isfurEn haday dumarka sas samen kahayen